Raysal wasaraaha Sweden oo ka hadlay weerarka ka dhacay Belgium | Somaliska
Raysal wasaraaha Sweden oo ka hadlay weerarka ka dhacay Belgium
Saaka xiligii shaqada loo dareeray waxaa weerar argagixiso lagu qaaday magaalada Brussels ee caasimada Belgium isla markaana ah fadhiga midowga Europe (EU). Weerarkaan oo ka dhacay ayroboorka iyo tareenada dhulka hoostiisa mara ayaa ilaa hada waxaa la soo sheegayaa in ay ku geeriyoodeen dad ku badan 30 qof.
Raysal wasaraaha Sweden Stefan Löfven ayaa durbadiiba hadal bixiyay arintaan, isagoo saxaafada u sheegay in uu weerarkaan yahay mid ka dhan dimoqraadiyada Yurub. Waxa uu intaasi ku daray in dowladu ay xaalada daqiiqad kasta la socoto. Iyadoo hadda la adkeeyay amaanka goobaha muhiimka ah ee Sweden, sida Ayroboorka Arlanda.
Waxaa sidoo kale ka hadlay arintaan hogaamiyaasha xisbiyada mucaaradka Sweden, sida Anna Kinberg Batra oo hogaamisa Moderaterna (M) waxay Twitter ku qortay in “lala dagaalamo argagixisada. ”
Weerarkaan ayaa noqonaya midkii ugu cuslaa ee dhawaan ka dhaxa wadamada Yurub ka dib weerarkii ka dhacay magaalada Paris sanadkii hore.
asc walaahi waa wax xun in umaad dalkooda joogo o shaqo iyo iskola uwada dareerayo la laayo iyado magac dimeed oo laga been sheegayo lugo gabanaayo aad iyo aad ayaan uga xumahaay.diintena waa diin nasteexo oo macaan ee maho diin dadka lugu dhibo ama lugu dhibaatoyo . allah waxaan ka baryaaya in umada islaamka ah xaqa tuuso waxaan sheeyadiinta ahna ilaah ka qabto
dhibaatadan mid cusub maaha lkin waa mid waagi beryaba ka sii dadeyso
walhi waa wax argagax hel oo weliba sii fidaayo sanadki hore ayey ahyd markii laba jeer la weeraray faransiska sanadkaana waa biljimka waxaa isweydiin mudan malaga gortagii doonaa oo la baa i doonaa mise weysii jiri doonaan. waxan ku fikireynay in aan meel amaan ah imaanay lkin waxan daremayaa aduunka in eysan jirin meel amaan ah wakhti xaadirkaan ilaahey qaatumada kheyr hanoogu qatimo anaga iyo intii islaam ah amin
Asc all aqyaarta lkn wixii khayra alaha nawafajiyo insha allah saafi ma saafi abdilahibaa ok mahadsanidiin
March 22, 2016 at 19:55
saafi oo ay nuux qarabada ahaayeen
March 22, 2016 at 21:03
wcl walaalo mahamud. maku fahmin maxa ka wada nuux qarabada ahaayen
March 22, 2016 at 22:57
Raisul wasaaraha sweden oo si kulul uga hadlay kulaha Ma wax qatar ayuu kula noqday hadalka ninkaan iska hadlay war ilmaha iyo naagaha siiriya lagu laaynaayo muu ka hadlo muuka hadlo falastiin gaal iyo gaalo raac is aruursatay
March 23, 2016 at 11:01
Falastiin Iyo siriyada shegeyso maxa noga galey aniga somalibaanu nahaye .
Filis hadeesan falastiin iyo siiriya waxna kaa galin hadaba biljim iyo gaalada miyaad futada ka dhaqeesaa
March 24, 2016 at 00:26
Cabdifatah aflagadadu waceeb hadan kusu aalo adiga Wa adiga carabta u gubanaye maad dalkaga ugubatid adiga wadaniyad kaladheer mida kale anaga yurub hada kunolnahay waxa dhacayo kuma faraxsanin mida kale waxan nahay muslim waxa dhacayana wa wax been loga shegayo islamka ilahey ba ciso sharaf siyay islamka
Yurub hadii lagu nool yahay gaalada futada looma dhaqo waxaana wax lalaa yaabo ah qarax markuu xamar ka dhoco somalida weey ku farxaan wadan gaalo markuu qarax ka dhacane wey naxaan och marka kulama yaabayo
Qoraalada haka Tuurin meesha wax yahoow dhintay maxaad la aqrineysa kabacdina utuureysa
Bismilaah waraan ninkadan caytamaayo xumaan ta jooji iyo caayda. Adiga waa layqaana waa kuwii back idiin lee diinta ka yaqaneey waye xegeed ku aragteey qof islaam ah oo isaga idilaayo unadana halaagayo oo hadana jaana rabo. Marka walaalo dhiiga waa xartan marna ha iloowin. Aad iyo Aad ayeey igubta dhibatada reer falastiin iyo imada islaam ka oo dhaan laakiin lama dhihi karo falastiin aya la filaay ee umad kalasa hala laay bila micno öa aan now now now
Siraad dhuusada iga wareeji habar yahay gaaban
oday warka badan dhaf . lakiin aniga waxaan ku dhihi lahaa afkaada iyo waxaad qoreeyso anshaxooda ilaali .mida kale dadka ixtiraam oo seef labood nimada iska dhaaf .mise waxaa tahaay umada hoo ee isqarxi meleey ujeedan iyo meleey kajeedan anaan aqoon.
Asc aqyaarta saafi abdilahi gabar ay qarabo yihiin nuux yar ladhaho oo nairobi joogay miyaa adiga ? italia ayan ku ogaa saafi abdiahi
wixii qaladana sorry hadadan ahayn qoftas.
March 24, 2016 at 22:00
wcl mahamud waa saafi från göteborg walalo
Saafi maxaad ka hadleesaa
ok mahadsanid abayo